RW Rooble oo ka gaabsaday dhallinyarada ku maqan Eritrea | KEYDMEDIA ONLINE
RW Rooble oo ka gaabsaday dhallinyarada ku maqan Eritrea
Waxaan wali xal loo hilin cabashada waalidiinta Soomaaliyeed ee Dowladda Fadaraalka Soomaaliya, si qarsoodi ah caruurtoodii u geysay dalka Eritrea.
MUQDISHO, Soomaaliya – Wareysi uu bishii August 2021 bixiyay Cabdisaciid Muuse Cali, oo ah la-taliyaha amniga Farmaajo, ayuu ku sheegay in 5,000 (Shan Kun), oo dhalinyaro ah ay Villa Somalia u dirtay Eritrea, dad kale, oo qubruro ku ah, dhanka ciidnka waxa ay tirada gaarsiiyeen 7000 (Todobo kun), halka xubno sarsare oo Mucaaradka ka tirsan ay intaas ka sii badiyeen.
Bishii December ee sanadkii hore, waxa yar kadib, markii xilka Ra’iisul Wasaaraha loo magacaabay Maxamed Xuseen Rooble, ayuu soo ifbaxay war ah in dhalinyaro Soomaaliyeed oo Dowladdu tababar ugu qaaday dalka Eritrea loo daabulay gudaha Itoobiya si ay uga qeyb qaataan dagaalka ka dhanka ah Urur-ka TPLF, oo ka soo horjeeda nidaanka Abiy Axmed.
Inkastoo Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Xil-gaarsiinta Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbe, beeniyay warkaan, isla-markaana ay ku raacday Wasaaradda Arrimaha Dibadda Itoobiya, hadana waxa ay Dowladda Somaaliya ku fashilantay in ay la timaaddo caddeyn rasmi ah oo la xariirta nolosha dhalinyarada maqan.
Tan iyo dhamaadkii sanadkii hore, waalidiinta ay caruurtu ka maqan tahay, ayaa ku baannaan-baxa waddooyinka waaweyn ee ku yaalla magaalooyinka dalka, qaar ka mid ah waalidiinta ayaa lagu wargaliyay geerida caruurtooda, halka qaar kalana aan dhag qalaq loo siin.
121 maalin, ayaa laga joogaa, 12 June 2021, oo ku beegneyd markii uu Ra’iisul Wasaare Rooble, magaacaabay guddiga xaqiiqo radinta cabshada Waalidiinta, ilaa hadda ma jiro wax shaqo ah oo guddigu qabtay, isla-markaana uu la wadaagay bulshada.
Guddiga uu RW Rooble, magacaabay waaa ku jiray qaar ka mid ah shaqsiyaadka u eedeysan kiiska askarta, sida Safiirka Soomaaliya u fadhiya Itoobiya, Cabdullahi Axmed Jaamac, iyo Taliyaha Ciidanka xoogga dalka, Gen, Odawaa Yuusuf Raage, oo ay qasab tahay in ay wax ka ogaayeen shirqoolkii loo maleegay dhalinyarada.
Waalidiintu, waxa ay RW Rooble, ku eedeeyeen, inuu iska indhatiray, magacaabidda guddi isku dhaf ah, oo lagu kalsoonaan karo, sida inuu min hal xubin ka soo magacaabo guddiga ay iska dhex doorteen waalidiinta, gudiyada ammaanka iyo xaquuqul iinsaanka ee labada gole ee Baarlamanka, Guddiga Arrimaha Dibadda ee BFS, Ururrada Bulshada iyo Axsaabta Mucaaradka.
Ra’iisul Wasaaraha Xil-gaarsiinta, wuxuu ku fashilmay inuu umadda u caddeeyo, waxa ku hor-gudban, shaqada guddigii uu u magaacabay barista kiiska dhallinyarada, iyo inuu waalidiinta xaafiiska ku hor bannaan-baxa xog ka siiyo carruurtooa.
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, wuxuu kamid ahaa shaqsiyaadka faro ku tiriska ah ee wax ka ogaa diridda ciidankaan, waxaana waalidiintu si weyn uga codsadeen inuu hadlo, hor yimaado hooyooyinka oynaya, unu sheego inta uu ka ogyahay dhalinyaradaan maqan.
Taliyihii hore ee NISA, Fahad Yaasiin, ayaa la rumeysan yahay inuu ka danbeeyay qaadidda ciidankaan, mana jirto cid su’aal ka weydiisay tan iyo markii uu soo if-baxay warka dhiillada leh ee la xariira dhalinyarada Soomaaliyeed.